Lasa fanampiana ho an’ny traboinan’ny tondradrano vokatry ny rivodoza ny fampidirana “fahana” amin’ny finday any Filipina · Global Voices teny Malagasy
Mandrisika ireo fandahara-pifandraisana mahomby ho isan'ny fitantanana ny loza voajanahary ny manampahaizana
Voadika ny 25 Novambra 2020 4:55 GMT
Tondradrano mahatsiravina namely ny faritra atsinanan'ny Nosy Luzon, anisan'izany ny tanàna maro tao Metro Manila, nofaritan'ny mponina ho ratsy indrindra tao anatin'ny taona maro. Saripikan'i Altermidya
Ity lahatsoratra voahitsy an'i Raymund B. Villanueva ity dia navoaka voalohany tao amin'ny Kodao, tranokalam-baovao tsy miankina any Filipina. Navoaka ato amin'ny Global Voices indray ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Filipiana maro no nahita fomba vaovao handefasana fanampiana avy hatrany amin'ireo traboina noho ny tondradrano nanjo an'i Luzon, ilay nosy lehibe indrindra ao Filipina, vokatry ny rivodoza Vamco (fantatra amin'ny anarana hoe Ulysses ao amin'ny firenena) dia ny fahana finday maimaimpoana.
Manerana an'i Filipina, miantehitra amin'ny fividianana fahana mialoha ny ankamaroan'ny mpikirakira finday. Mila mampiditra fahana na mividy fahana amin'ny sarany voatondro izy ireo mba handefasana hafatra na hiditra amin'ny aterineto. Mamela ny fandefasana sy ny fandraisana fahana avy mpampiasa finday hafa ihany koa ny rafitra.
Izany indrindra no nahatonga Michael Ramos Pagulayan, izay avy any amin'ny faritanin'i Isabela any Luzon saingy monina any Manila izy ankehitriny, nanapa-kevitra ny: handefa fahana 50 pesos (1 dolara amerikana) ho an'ireo izay mila izany ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy any Auitan, San Pablo, Isabela.
Raha nanontaniana i Pagulayan hoe ohatrinona no azony nozaraina hatreto dia nilaza izy fa afaka nandefa 50 pesos tsirairay ho an'ireo mpiara-mianatra aminy taloha tany amin'ny sekoly fanabeazana fototra.
Miezaka manampy aho satria tsy manana fomba andehanana mody noho ny famerana avy amin'ny valanaretina coronavirus. Tsy afaka mandeha fiaramanidina mody aho, tsy afaka mitondra fiara aho. Ka nieritreritra ny hizara fahana finday ho an'ireo traboinan'ny tondradrano izay mila mifandray amin'ireo havana eto Manila aho.
Tsy ny maro anefa no nandray ny tolotra nomeny, angamba, noho izy ireo lany vatoaratra na tsy nahazo tambajotran'ny finday.
Tao anaty rano nanomboka tamin'ny 12 Novambra ny vondrom-piarahamonina misy an'i Pagulayan ao Auitan izay nolazain'ny mponina maro ho tondradrano ratsy indrindra tao anatin'ny folo taona. Betsaka ireo niharam-boina tao amin'ity vondrom-piarahamonina ity no nijanona teny ambony tafontranony satria tsy afa-manoatra ny mpamonjy voina noho ny korian-drano mahery.
Nanome fahana finday 30 ka hatramin'ny 100 pesos (2 USD) ho an'ireo traboinan'ny tondradrano efa ho 30 tao amin'ny faritanin'i Cagayan sy Isabela, Luzon ihany koa i Anna Balasbas, monina ao Pasay ao Metro Manila.
Nameno ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy ny mpisera nangataka vaovao momba ny fianakaviany any amin'ny faritra misy ny tondradrano mahery vaika.
Ny finday no fomba iray azo antoka indrindra mba hifanakalozan'ny fianakaviana vaovao mandritra ny voina any Filipina rehefa tapaka ny herinaratra sy fifandraisana noho ny rivotra mahery sy tondradrano, araka ny asehon'ity sary navoaka tao amin'ny Twitter ity:
MILA FANAMPIANA NY LEMAKA CAGAYAN. Niainan'ny vondrom-piarahamonina ao Isabela afovoany sy Aparri, Cagayan taorian'ny fisokafan'ny tohodranon'i Magat miisa fito noho ny oram-be nentin'ny orana #UlyssesPH ny tondradrano mbola tsy nisy toa azy.
Ny fifandraisana endrika fanampiana amin'ny loza voajanahary sy ho fanampiana ny traboina
Nilaza i Ares Gutierrez, manamboninahitra ao amin'ny Filankevitry ny Fitantanana ny Loza Voajanahary sy ny Fanampiana ao an-tanàndehiben'i Quezon izay mandrindra ny asa fanampiana ao an-tanàna any amin'ny faritr'i Metro Manila, fa ny serasera no sehatra manan-danja indrindra nefa matetika no atao ambanin-javatra amin'ny fitantanana ny loza voajanahary sy ny vonjy taitra.
Mampifandray ny zava-drehetra ny fifandraisana. Mila rafi-pifandraisana mahomby ny mpitantana ny voina hahafahan'izy ireo mandrindra tsara ny ezaka atao manolona ny loza sy mamonjy ain'olona bebe kokoa.
Nilaza i Gutierrez fa manakana ny fadisoam-baovao ary manome toky ny besinimaro fa efa akaiky ny fanampiana ihany koa ny serasera ara-potoana sy matetika.
Ny serasera mahomby hatrany ifotony no ahafahan'ny mpanapa-kevitra mamaritra raha toa ka mandeha ny drafitra atao manoloana ny loza na mila fandrindrana sy ny hoe inona ihany koa ny karazana fanampiana fanampiny ilaina, hoy izy.
Amin'ny fotoanan'ny loza ny vahoaka no te hamantatra ny fomba na ny toerana ahazoana fanampiana, ny loza mety hitranga hatrehin'izy ireo ary ny fomba hiarovan'izy ireo sy ny fianakaviany tena.
Nilaza i Gutierrez, manam-pahaizana momba ny fitantanana ny krizy sy ny loza voajanahary fa fomba iray hanonerana ny tsy fahampiana na ny fahatapahan'ny fifandraisana noho ny loza voajanahary ny fanomezan'ny olom-pirenena fahana finday.
Mirotsaka an-tsehatra ny olona rehefa mahita olona mila vonjy ianao. Te hirotsaka an-tsehatra ianao ary hanampy. Mety hamonjy aina ny fizarana fahana finday.
Nilaza kosa anefa i Gutierrez fa tsy misy dikany ny fihetsika toy izany raha tapaka tanteraka ny tambajotra.
Tokony hanana ny karazana serasera rehetra ao an-toerana ny firenena lasibatry ny loza voajanahary toa antsika mba tsy ho tapaka fifandraisana mandritra ny fotoan-tsarotra.
Nanentana ny governemanta, ny sehatra tsy miankina ary ny akademia ihany koa i Gutierrez hiara-hiasa amin'ny fametrahana ny drafi-piomanana amin'ny loza voajanahary sy ny serasera marobe izay miazoazo ao amin'ny tabilaon'ny fandaharan'asan'ny sampan-draharaha isankarazany fotsiny kanefa tsy ampiharina.